के ट्विटर तपाईंको सेवा च्यानलमा अझै छ? | Martech Zone
सोमबार, अक्टोबर 12, 2009 बुधबार, फेब्रुअरी 10, 2016 Douglas Karr
यदि म तपाईंको कम्पनीलाई गुनासो वा प्रश्नको साथ कल गर्छु भने, तपाईंको ग्राहक प्रतिनिधि मात्र सुन्छन्। यदि म ट्विटरमा सोध्छु, यद्यपि, मेरा followers,००० अनुयायीहरूले मेरो सुन्नेछन् ... र ती रीट्वीटले दर्शकहरूलाई उनीहरूको नेटवर्कमा विस्तार गर्दछ। ट्विटर द्रुत रूपमा जवाफ चाहने ग्राहकहरूको लागि प्रजातान्त्रिक कारक बनिरहेको छ।
के तपाई ट्विटर सुन्नुहुन्छ? ट्विटर लहर वा कम्पनी हैन ... यो एक प्रभावी संचार माध्यम हो। तपाइँले भाग लिनु पर्दैन (जवाफ दिनु बाहेक), तर तपाई निश्चित रूपमा यस महत्त्वपूर्ण च्यानललाई वेवास्ता गर्नुहुन्न।
सेल्सफोर्सले भर्खर उनीहरूको सेवा क्लाउडमा एक ट्विटर एकीकरण सुरू गर्‍यो (उनीहरूसँग अन्य सामाजिक मिडिया एकीकरणहरू पनि छन्)। के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ विक्रेताहरूको सेवा क्लाउडको साथ ट्विटर, तपाइँको ग्राहक सेवा प्रयासहरु विस्तार?
सँधै जडित, सँधै, अत्यधिक विचार गरिएको, चाल ग्राहकमा संसारमा स्वागत छ। यो एक ग्राहक हो जसले बुझ्छ कि उनीहरूसँग अब शक्ति छ। अब तिनीहरू केवल तपाइँबाट उत्पादन वा सेवा भन्दा बढी अपेक्षा गर्छन्। तिनीहरू समान शर्तमा भएको सम्बन्धको आशा गर्छन्। तिनीहरू तपाईंको विश्वको केन्द्रमा हुने आशा गर्छन्। र तपाईंले त्यहाँ राख्नु पर्छ। तपाइँ एक ग्राहक कम्पनी बन्न आवश्यक छ।
कमसेकम म एक बाट फिड लिन सिफारिस गर्दछु ट्विटर खोज.
टैग: ग्राहक सेवारेडियनबिक्री बलtwitterट्विटर एकीकरण
सामाजिक मिडिया किन अब, को प्रश्न होईन, तर कसरी। हामीलाई एक सुन्ने र संलग्नता उपकरणको रूपमा सिफारिश गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
Radian6 मा समुदाय व्यवस्थापक